Miara-miasa amin'ny hery avy any an-danitra
" Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany". Asa1:18
Nanapa-kevitra Andriamanitra fa tsy misy zavatra avelany tsy tomombana ny fanafahana ny olona avy amin'ny fanagejan' ny fahavalo. Taorian'ny niakaran'i Kristy tany andanitra, dia nomena ny olona ny Fanahy Masina, hanampy izay rehetra te hiara-miasa Aminy, ka hamboatra sy hamolavola ny toetran'ny olona. Nosoritsoritan'ny Mpamonjy ny anjara asan'ny Fanahy Masina. Hoy Izy: "Ary raha tonga Izy, dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana" - Jao. 16:8. Mpandresy lahatra sy mpanamasina ihany koa ny Fanahy Masina.
Satria tsy misy afaka ny mibebaka amin'ny fahotany raha tsy miaiky izany izy, dia mazava ny filàntsika ny firaisana amin'ny Fanahy Masina amin'ny asa hanatrarana ireo lavo. Hiasa foana ny fahaizan'olombelona raha tsy miray amin'ny anjelin'ny lanitra isika. Noho ny tsy fisian'ny fahalalana ny fahamarinana mamelombelona sy ny fiasan'ny hevidiso mamitaka no mampirefarefa amin'ny tany sy mampilentika ny olona ao anatin'ny lavaka lalin'ny fitotonganam-paharatsiana.
Tokony hiara-miasa amimpirindrana ny anjely sy ny olona hampianatra ny fahamarinan'Andriamantra amin'ireo tsy mahalala izany, mba ho afaka amin'ny fatoran'ny ota izy ireo. Ny fahamarinana ihany no manafaka ny olona. Io fahafahana fahalalahana avy amin'ny fahalalana ny fahamarinana io dia tokony hotorina amin'ny manana aina rehetra.
Liana amin'ity asa lehibe , masina ity Jesôsy Kristy, Andriamanitra Izy tenany mihitsy ary ireo anjelin'ny lanitra. Ny olona dia nomena tombontsoa ambony hanambara ny toetran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanoloran- tenany tsy misy fitiavan-tena amin'ny ezaka hanafaka ny olona amin'ny lavaka lalin'ny faharavana ilentehany. Ny olona tsirairay izay milefitra mba hohazavain'ny Fanahy Masina, dia hampiasaina hanatanteraka izany fikasan'ny lanitra novolavolaina izany. I Kristy no Lohan'ny fiangonana, hanome voninahitra Azy ny fisian'ny fandraisana anjara betsaka kokoa amin'ny lafiny rehetra ataon'ny fiangonana eo amin'ny asa famonjem-panahy.
Saingy mila manome sehatra misimisy kokoa ny Fanahy Masina ny olona, mba hiraisan'ny mpiara-miasa fo sy saina ary mba handroso amin-kery toy ny sahala amin'ny vondron-tafika. Aoka ny rehetra hahatsiaro, fa isika dia "natao ho fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona" - 1 Kôr. 4:9.